ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): စာရေးဆရာဖြစ်ချင်သော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း(၁)
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ စာတွေကို ဖတ်ချင်ကြသော သူများအတွက်ရော ၊ လင်းကိုယ်တိုင် လင်းဘလော့ခ်မှာရှိနေစေချင်တာရော အားလုံးပေါင်းပြီး ဒီစာတွေကို လက်ညောင်းခံရိုက်ပေးပြီး ဖော်ပြခြင်းပါ .. ။ အချို့မိတ်ဆွေတွေ တောင်းဆိုတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ ဘ၀ပါရမီဖြည့်ဖက် ဒေါ်ခင်ကြည်အကြောင်းကို ရေးသားဖို့အတွက် လက်လှမ်းမှီသလောက် ဆိုင်တွေ ၊ လူတွေထံမှာ လင်းလက် လိုက်ရှာပေမယ့် ရှာမတွေ့ခဲ့ပါ။ ဘ၀လက်တွဲဖော်ဆိုတာ အားလုံးအတွက် အရေးကြီးပါတယ် . ။ မိမိဆောင်ရွက်ချင်တဲ့ အရာအားလုံးကို နားလည်ပေးနိုင်ပြီး ပါရမီဖြည့်နိုင်မယ့်သူဆိုတာ တကယ်တော့ ရှားပါးရတနာတစ်ခုပါ .. ။ အခု ဖော်ပြမယ့် “စာရေးဆရာဖြစ်ချင်သော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း”အကြောင်းက သိပ်ရှည်လွန်းလို့ နှစ်ပိုင်းခွဲ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ရှင် .. ။
thanks for your hard work in typing this out. :) It would be really nice if we can track down some of Bogyoke Aung San's speeches. I would love to see them. :) I will try to track down next time I go to Myanmar (Burma)
Thanks! I love Bo Gyoke very much but know very little about him except the things we were learned in high school, which is not much.